यहोवा हाम्रो वासस्थान | अध्ययन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उज्बेक उन्डुबेली एफिक एस्टोनियन ओरोमो काजाक किकुयु किन्यारवान्डा किर्गिज कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या डच डेनिश ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पंगासिनन् पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेन्डा मले मालागासी माल्टिज मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिथुआनियन लुओ वारे-वारे वोलाइटा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिलिगेनोन
“हे परमप्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईं हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ।”—भज. ९०:१, NRV.
प्राचीन समयका वफादार सेवकहरूका लागि यहोवा कसरी “वासस्थान” साबित हुनुभयो?
अब्राहामको उदाहरणबाट हामी के सिक्न सक्छौं?
यहोवा हाम्रो “वासस्थान” हुनुहुन्छ भनेर कसरी देखाउन सक्छौं?
१, २. यस युगमा परमेश्वरका सेवकहरूले आफूलाई कस्तो ठानेका छन्‌? कुन अर्थमा तिनीहरू घरबारविहिन छैनन्‌?
अहिलेको संसारमा के तपाईं घरमै भएको जस्तो सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न भने यस्तो महसुस गर्ने तपाईं मात्र हुनुहुन्न। प्राचीन समयदेखि नै यहोवालाई साँच्चै प्रेम गरेकाहरूले यस युगमा आफूलाई परदेशी वा बिरानो ठानेका छन्‌। जस्तै, कनानमा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्दा परमेश्वरका विश्वासी सेवकहरूले आफू “परदेशी र अस्थायी बासिन्दा हौं भनी जनसमक्ष घोषणा गरे।”—हिब्रू ११:१३.
२ त्यसैगरि ‘स्वर्गको नागरिकता’ पाएका ख्रीष्टका अभिषिक्त अनुयायीहरू पनि आफूलाई यस युगमा “परदेशी अनि प्रवासी” ठान्छन्‌। (फिलि. ३:२०; १ पत्रु. २:११) ख्रीष्टका “अरू भेडा” पनि उहाँजस्तै “यस संसारका होइनन्‌।” (यूह. १०:१६; १७:१६) तर परमेश्वरका सेवकहरू घरबारविहिन भने छैनन्‌। वास्तवमा हामीले सबैभन्दा सुरक्षित र मायालु घर पाएका छौं, जुन घर हामी विश्वासको आँखाले देख्न सक्छौं। मोशाले लेखे: “हे परमप्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईं हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ।” * (भज. ९०:१, NRV) प्राचीन समयका वफादार सेवकहरूका लागि यहोवा कसरी “वासस्थान” साबित हुनुभयो? आज आफ्ना सेवकहरूका लागि उहाँ कसरी “वासस्थान” हुनुहुन्छ? अनि भविष्यमा उहाँ कसरी एक मात्र सुरक्षित वासस्थान हुनुहुनेछ?
यहोवा प्राचीन समयका सेवकहरूका लागि “वासस्थान” हुनुभयो
३. भजन ९०:१ मा हामी कस्तो विषय, दृश्य र समानता पाउँछौं?
३ बाइबलमा थुप्रै उपमा प्रयोग गरिएका छन्‌। जस्तै:- भजन ९०:१ मा। यस पदमा प्रयोग गरिएको उपमामा विषय, दृश्य र समानता छ। यसको विषय हो, यहोवा। दृश्य हो, वासस्थान अर्थात्‌ बस्ने ठाउँ। अनि समानता हो, यहोवा बस्ने ठाउँजस्तै हुनुहुन्छ। यहोवा आफ्ना सेवकहरूलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ किनकि उहाँ प्रेमको मूर्तरूप हुनुहुन्छ। (१ यूह. ४:८) उहाँ शान्तिका परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, जसले वफादार सेवकहरूलाई “सुरक्षित रहन दिनुहुन्छ।” (भज. ४:८) उदाहरणको लागि, वफादार कुलपिताहरूसित उहाँले गर्नुभएको व्यवहार विचार गर्नुहोस्। उहाँले अब्राहामसित कस्तो व्यवहार गर्नुभयो, सुरुमा त्यसबारे विचार गरौं।
४, ५. यहोवा अब्राहामको लागि कसरी “वासस्थान” हुनुभयो?
४ यहोवाले अब्राहामलाई ‘तेरो देश र तेरा कुटुम्बबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा’ भन्नुहुँदा तिनले कस्तो महसुस गरे होलान्‌, हामी कल्पना मात्र गर्न सक्छौं। तर यहोवाका यी शब्दहरूबाट तिनले सान्त्वना पाएको हुनुपर्छ: “म तँबाट एउटा ठूलो जाति खडा गर्नेछु। म तँलाई आशिष्‌ दिनेछु र तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु। . . . तँलाई आशिष्‌ दिनेहरूलाई म आशिष्‌ दिनेछु, र तँलाई सराप दिनेहरूलाई म सराप दिनेछु।”—उत्प. १२:१-३.
५ यहोवाले अब्राहाम र तिनका सन्तानहरूका लागि आफू सुरक्षित वासस्थान हुने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। (उत्प. २६:१-६) उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो। उदाहरणको लागि, अब्राहामलाई मार्न र तिनकी पत्नीलाई लिएर जानदेखि उहाँले मिश्रका फिरऊन र गरारका राजा अबीमेलेकलाई रोक्नुभयो। (उत्प. १२:१४-२०; २०:१-१४; २६:६-११) बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ: “[यहोवाले] कसैलाई पनि तिनीहरूमाथि अत्याचार गर्न दिनुभएन, तिनीहरूको खातिरमा उहाँले राजाहरूलाई पनि यसो भनेर हप्काउनुभयो: ‘मेरा अभिषेक भएकाहरूलाई नछोओ, र मेरा अगमवक्ताहरूलाई केही हानि नगर।’”—भज. १०५:१४, १५.
“म तँलाई छोडनेछैनँ”
६. इसहाकले याकूबलाई के भने? याकूबको मनमा कस्ता कुराहरू खेलेको हुनुपर्छ?
६ यी अगमवक्ताहरूमा अब्राहामका नाति याकूब पनि पर्थे। याकूबको विवाह गर्ने समय भएपछि तिनका बुबा इसहाकले यसो भने: “तैंले कनानी स्त्रीहरूमध्ये कसैलाई विवाह नगर्नू। पद्दनराममा तेरी आमाका बाबु बतूएलको घरमा गएर त्यहींबाट तेरा मामा लाबानका छोरीहरूमध्ये एउटीलाई विवाह गर्।” (उत्प. २८:१, २) याकूबले ढिलासुस्ती नगरी बुबाको आज्ञा पालन गरे। कनानमा भएको आफ्नो परिवार छोडेर सयौं किलोमिटर टाढा पर्ने हारानसम्म सम्भवतः एक्लै यात्रा गरे। (उत्प. २८:१०) तिनको मनमा यस्ता कुराहरू खेलेको हुनुपर्छ: ‘कहिलेसम्म घरदेखि टाढा बस्नुपर्ने होला? के मलाई देखेर मामा खुसी हुनुहोला? अनि के उहाँले मेरो लागि परमेश्वरको भय राख्ने केटी खोजिदिनुहोला?’ तर बेर्शेबादेखि लगभग १०० किलोमिटर टाढा पर्ने लूज पुग्दा तिनका सबै चिन्ता हराएको हुनुपर्छ। कसरी?
७. सपनामा परमेश्वरले याकूबलाई कस्तो आश्वासन दिनुभयो?
७ याकूब लूजमा छँदा यहोवा सपनामा तिनीकहाँ देखा पर्नुभयो र यसो भन्नुभयो: “म तँसँग छु, र तँ जहाँसुकै गए तापनि तँलाई रक्षा गर्नेछु, र तँलाई यस ठाउँमा फर्काएर ल्याउनेछु, किनकि मैले तँलाई भनेको कुरा पूरा नगरूञ्जेल म तँलाई छोडनेछैनँ।” (उत्प. २८:१५) यी दयालु शब्दहरूबाट याकूबले कति धेरै सान्त्वना पाए होलान्‌! यहोवाले आफ्नो प्रतिज्ञा कसरी पूरा गर्नुहोला भनेर हेर्न याकूब एकदमै उत्सुक भएको हुनुपर्छ। विदेशी भूमिमा सेवा गर्न आफ्नो घर छोड्नुभएको छ भने सायद तपाईं याकूबको भावना बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर यहोवाले तपाईंको हेरचाह गर्नुभएको तपाईंले पक्कै पनि अनुभव गर्नुभएको छ।
८, ९. यहोवा कुन तरिकामा याकूबको “वासस्थान” हुनुभयो? यसबाट हामी के सिक्न सक्छौं?
८ याकूब हारान पुगेपछि तिनका मामा लाबानले तिनलाई न्यानो स्वागत गरे अनि पछि लेआ र राहेललाई पत्नीको रूपमा दिए। तर केही समयपछि लाबानले दस चोटिसम्म ज्याला बदलेर तिनको शोषण गर्न खोजे। (उत्प. ३१:४१, ४२) तर यहोवाले हेरचाह गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै याकूबले सब अन्याय सहे। यहोवाले साँच्चै तिनको हेरचाह गर्नुभयो। परमेश्वरले याकूबलाई कनान फर्कने आज्ञा दिंदासम्ममा त तिनका “ठूला ठूला बगाल, नोकर-चाकर, ऊँट र गधाहरू” भइसकेका थिए। (उत्प. ३०:४३) गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्दै याकूबले यसरी प्रार्थना गरे: “तपाईंको दासलाई जत्ति करुणा र सत्यता देखाउनुभएको थियो त्यसको म कत्ति पनि योग्य छैनँ। किनभने एउटा लाठो मात्र लिएर मैले यस यर्दन नदी तरेको थिएँ। तर अहिले मेरा दुइवटा दल भएका छन्‌।”—उत्प. ३२:१०.
९ यस्ता उदाहरणले मोशाका यी शब्दहरूको सत्यता प्रस्ट पार्छ: “हे परमप्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईं हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ।” (भज. ९०:१, NRV) यी शब्दहरू आज हाम्रो सन्दर्भमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ किनकि यहोवा “सरिरहने छायाजस्तो . . . परिवर्तन भइरहनुहुन्न।” आज पनि उहाँ वफादार सेवकहरूको मायालु र सुरक्षित वासस्थान हुनुहुन्छ। (याकू. १:१७) कसरी? आउनुहोस् बुझौं।
यहोवा आज हाम्रो “वासस्थान”
१०. यहोवा आफ्ना सेवकहरूको सुरक्षित वासस्थान भइरहनुहुनेछ भनेर हामी किन पक्का हुन सक्छौं?
१० यो अवस्था कल्पना गर्नुहोस्: तपाईं अन्तरराष्ट्रिय आपराधिक सङ्गठनविरुद्ध अदालतमा बयान दिंदै हुनुहुन्छ। यस सङ्गठनको नेता असाध्यै बाठो र शक्तिशाली छ। ऊ निर्दयी हत्यारा हो र झूट बोल्नमा खप्पिस छ। त्यो दिन अदालतबाट बाहिर निस्कँदा तपाईं कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? के तपाईं सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ? पक्कै गर्नुहुन्न! यस्तो बेला सुरक्षाको माग गर्नु जायजै हो। आज यहोवाका सेवकहरूको अवस्था पनि यस्तै छ। तिनीहरू परमेश्वरको मुख्य शत्रु सैतानविरुद्ध साहसी भई बोल्छन्‌। (प्रकाश १२:१७ पढ्नुहोस्) तर के सैतानले परमेश्वरका सेवकहरूलाई चुप लगाउन सकेको छ? छैन। वास्तवमा हामी संसारभरि नै धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई प्रचार गर्दै छौं। यो कसरी सम्भव भएको छ? कारण एउटै मात्र छ: यहोवा हाम्रो “वासस्थान” हुनुहुन्छ। यस अन्तको दिनमा उहाँले आफ्ना सेवकहरूलाई अझ धेरै सुरक्षा र आशिष्‌ दिइरहनुभएको छ। (यशैया ५४:१४, १७ पढ्नुहोस्) तर सैतानको बहकाउमा पऱ्यौं भने यहोवा हाम्रो सुरक्षित वासस्थान भइरहनुहुनेछैन।
परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूले उहाँका सेवकहरूलाई मदत र सुरक्षा दिन्छन्‌
११. कुलपिताहरूबाट हामी कस्तो पाठ सिक्न सक्छौं?
११ कुलपिताहरूबाट सिक्न सक्ने अर्को पाठ पनि विचार गरौं। कनानमा बसे तापनि तिनीहरू त्यस देशका मानिसहरूबाट टाढै बसे, उनीहरूको खराब र अनैतिक तौरतरिकालाई घृणा गरे। (उत्प. २७:४६) तिनीहरू ‘यसो गर्नुपर्छ,’ ‘यसो गर्नु हुँदैन’ भन्ने लामो सूचीमा होइन, यहोवाका सिद्धान्तहरूमा भर परे। यहोवा र उहाँको व्यक्तित्वबारे तिनीहरूलाई जे-जति थाह थियो, त्यो नै तिनीहरूको लागि पर्याप्त थियो। यहोवा तिनीहरूको वासस्थान हुनुभएकोले तिनीहरू यस संसारको भाग भएनन्‌। बरु तिनीहरू संसारबाट सक्दो अलग बसे। हाम्रो लागि कत्ति राम्रो उदाहरण! के तपाईं सरसङ्गत र मनोरञ्जनको सन्दर्भमा ती वफादार कुलपिताहरूको उदाहरण पछयाउने कोसिस गर्नुहुन्छ? दुःखको कुरा, मण्डलीका कसै-कसैलाई केही हदसम्म भए पनि सैतानको संसार नै आरामदायी लागेको छ। तपाईंलाई अलिकति मात्र पनि त्यस्तो लाग्छ भने यसबारे प्रार्थना गर्नुहोस्। यो संसार सैतानको हो भनेर नबिर्सनुहोस्। यस संसारले सैतानकै स्वार्थी मनोभाव झल्काउँछ, हाम्रो कुनै चासो राख्दैन।—२ कोरि. ४:४; एफि. २:१, २.
१२. (क) यहोवा आफ्ना सेवकहरूलाई कसरी मदत दिनुहुन्छ? (ख) यहोवाले यस्ता प्रबन्धहरू गरिदिनुभएकोमा तपाईं कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ?
१२ सैतानका युक्तिहरूको प्रतिरोध गर्न चाहन्छौं भने यहोवाले आफ्ना सेवकहरूका लागि मिलाउनुभएको हरेक प्रबन्धको पूरापूर सदुपयोग गर्नुपर्छ। ती प्रबन्धमा सभा, पारिवारिक उपासना र “वरदानको रूपमा पुरुषहरू” पर्छन्‌। हामीले चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्दा ती पुरुषहरूले सान्त्वना र मदत दिन्छन्‌। (एफि. ४:८-१२) वर्षौंसम्म परिचालक निकायको सदस्यको रूपमा सेवा गरेका भाइ जर्ज ग्याङ्गसले यस्तो लेखे: “भाइबहिनीमाझ हुँदा मलाई घरमा परिवारसँगै बसेको जस्तो लाग्छ।” के तपाईं पनि यस्तै महसुस गर्नुहुन्छ?
१३. हिब्रू ११:१३ बाट हामी कस्तो महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छौं?
१३ कुलपिताहरूबाट सिक्न सक्ने अर्को पाठ हो, तिनीहरूजस्तै हामी पनि वरपरका मानिसभन्दा भिन्नै देखिन डराउनु हुँदैन। अनुच्छेद १ मा चर्चा गरिएझैं तिनीहरूले “आफू बसोबास गरिरहेको भूमिमा परदेशी र अस्थायी बासिन्दा हौं भनी जनसमक्ष घोषणा गरे।” (हिब्रू ११:१३) के तपाईं भिन्नै देखिन कटिबद्ध हुनुहुन्छ? हो, यसो गर्न सधैं सजिलो हुँदैन। तर परमेश्वरको मदत र सँगी ख्रीष्टियनहरूको साथ पाएर तपाईं सफल हुन सक्नुहुन्छ। नबिर्सनुहोस्, तपाईं एक्लै हुनुहुन्न। यहोवालाई खुसी पार्न चाहने सबैले सैतान र त्यसको संसारविरुद्ध लडन्त लड्नुपर्छ। (एफि. ६:१२) यहोवामा भर पऱ्यौं र उहाँलाई आफ्नो सुरक्षित वासस्थान बनायौं भने हामी यो लडन्त जित्न सक्छौं।
१४. यहोवाका सेवकहरूले कुन “सहर”-को प्रतीक्षा गरे?
१४ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो: इनाममा नजर राख्दै अब्राहामको अनुकरण गर्नु। (२ कोरि. ४:१८) अब्राहाम “साँचो जग भएको त्यस सहरको प्रतीक्षामा थिए, जुन सहरको निर्माता र रचनाकार परमेश्वर हुनुहुन्छ” भनी प्रेषित पावलले बताए। (हिब्रू ११:१०) त्यो “सहर” मसीही राज्य हो। अब्राहामले त्यस “सहर”-को प्रतीक्षा गर्नुपऱ्यो तर हामीले भने गर्नुपरेको छैन। किनकि मसीही राज्यले स्वर्गमा शासन सुरु गरिसकेको छ। अनि यस राज्यले चाँडै पृथ्वीमा पनि शासन गर्नेछ भनेर थुप्रै प्रमाणले देखाउँछ। के यो राज्य तपाईंलाई वास्तविक लाग्छ? के यसले तपाईंको जीवनशैली, यस संसारप्रतिको धारणा र तपाईंका प्राथमिकताहरूलाई असर गर्छ?—२ पत्रुस ३:११, १२ पढ्नुहोस्।
यहोवा हाम्रो “वासस्थान” भइरहनुहुनेछ
१५. यस संसारमा भरोसा राख्नेहरूको भविष्य कस्तो छ?
१५ सैतानको संसारको अन्त नजिकिंदै जाँदा “प्रसववेदना” पनि बढ्दै जानेछ। (मत्ती २४:७, ८) महासङ्कष्टको दौडान जीवन निश्चय नै झन्‌झनै कष्टकर हुनेछ। भौतिक संरचनाहरू विनाश हुनेछन्‌ अनि मानिसहरू भयभीत हुनेछन्‌। (हब. ३:१६, १७) जीवन बचाउने कुनै उपाय नदेखेर तिनीहरू “गुफा र पहाडका चट्टानहरूमा” लुक्नेछन्‌। (प्रका. ६:१५-१७) तर कुनै गुफाले वा पहाडरूपी राजनैतिक तथा व्यापारिक सङ्गठनले तिनीहरूलाई सुरक्षा दिनेछैन।
१६. मण्डलीप्रति हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ र किन?
१६ यहोवाका सेवकहरूले भने “वासस्थान”-मा सुरक्षा पाइरहनेछन्‌। भविष्यवक्ता हबकूकजस्तै तिनीहरू ‘उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउनेछन्‌।’ (हब. ३:१८) त्यस कठिन समयमा यहोवा कसरी “वासस्थान” साबित हुनुहुनेछ? त्यो त समयले नै देखाउनेछ। तर हामी यस कुरामा पक्का हुन सक्छौं: इस्राएलीहरूले मिश्र छोडेको बेलामा जस्तै “ठूलो भीड” पनि व्यवस्थित हुनेछ र त्यस भीडले यहोवाबाट निर्देशनहरू पाउनेछ। (प्रका. ७:९; प्रस्थान १३:१८ पढ्नुहोस्) ती निर्देशन यहोवाले सायद मण्डलीमार्फत दिनुहुनेछ। सम्भवतः विश्वका हजारौं मण्डली यशैया २६:२० मा भविष्यवाणी गरिएको “भित्री कोठाहरू” हुनेछन्‌, जहाँ परमेश्वरका सेवकहरूले सुरक्षा पाउनेछन्‌। (पढ्नुहोस्) के तपाईं मण्डलीका सभाहरूलाई अनमोल ठान्नुहुन्छ? के तपाईं यहोवाले मण्डलीमार्फत दिनुहुने निर्देशन तुरुन्तै लागू गर्नुहुन्छ?—हिब्रू १३:१७.
१७. मरिसकेका वफादार सेवकहरूका लागि समेत यहोवा कसरी “वासस्थान” हुनुहुन्छ?
१७ महासङ्कष्टअघि नै मरिसकेका वफादार सेवकहरूका लागि समेत यहोवा “वासस्थान” हुनुहुनेछ। कसरी? वफादार कुलपिताहरू मरेको वर्षौंपछि यहोवाले मोशालाई यसो भन्नुभयो: “म . . . अब्राहामका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकूबका परमेश्वर हुँ।” (प्रस्थ. ३:६) येशूले पनि यी शब्दहरू उद्धरण गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले यसो भन्नुभयो: “उहाँ मरेकाहरूको होइन, तर जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनकि उहाँको नजरमा तिनीहरू सबै जीवित छन्‌।” (लूका २०:३८) हो, यहोवाप्रति वफादार भएर मरेकाहरू उहाँको नजरमा जीवित मानिसहरूजस्तै छन्‌ किनभने तिनीहरू पुनर्जीवित हुने निश्‍चित छ।—उप. ७:१.
१८. नयाँ संसारमा यहोवा आफ्ना सेवकहरूका लागि कुन अर्थमा “वासस्थान” हुनुहुनेछ?
१८ आउनै लागेको नयाँ संसारमा यहोवा अर्को अर्थमा पनि आफ्ना सेवकहरूका लागि “वासस्थान” हुनुहुनेछ। प्रकाश २१:३ यसो भन्छ: “हेर, परमेश्वरको बासस्थान मानिसहरूसित भएको छ र उहाँ तिनीहरूसित बस्नुहुनेछ।” यहोवाले सुरुको हजार वर्षसम्म येशू ख्रीष्टलाई पृथ्वीमाथि शासन गर्न दिनुहुनेछ। हजार वर्षको अन्तसम्ममा परमेश्वरले पृथ्वीको लागि राख्नुभएको उद्देश्य येशूले पूरा गरिसक्नुभएको हुनेछ। त्यसपछि उहाँले आफ्नो बुबालाई राज्य सुम्पनुहुनेछ। (१ कोरि. १५:२८) अनि त्रुटिरहित मानिसजातिलाई मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता पर्नेछैन; यहोवा नै तिनीहरूसित हुनुहुनेछ। हामीसामु कत्ति सुन्दर भविष्य! त्यतिन्जेल प्राचीन समयका वफादार सेवकहरूको उदाहरण अनुकरण गर्दै यहोवालाई आफ्नो “वासस्थान” बनाऔं।
^ अनु.2समकालीन अङ्ग्रेजी संस्करण-ले भजन ९०:१ लाई यसरी अनुवाद गरेको छ: “हे प्रभु, पुस्तौंदेखि तपाईं हाम्रो घर हुनुभएको छ।”